ढाईलाख रकम पचाउन हार्डवयर व्यवसायीको हत्या « Farakkon
ढाईलाख रकम पचाउन हार्डवयर व्यवसायीको हत्या
प्रकाशित मिति : २०७५ मङ्सिर १५ गते शनिवार
दाङ, मंसिर १६ । सामान किनेको रकम पचाउन ग्राहकले नै घोराहीका हार्डवयर व्यवसायीको हत्या गरेको रहस्य सार्वजकि भएको छ । रोल्पा जिल्लाको माडी गाउँपालिका वडा नं. ३ तालावाङ निवासी २८ बर्षीय अमर खत्रीले उभारोमा सामान लगेको दुई लाख ५४ हजार रकम पचाउनका लागि हार्डवयर व्यवसायी ४५ बर्षीय नन्दबहादुर घर्तीको हत्या गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
हत्या आरोपित खत्रीले गत भदौ महिनादेखि घोराहीमा आफ्नो नयाँ घर निर्माण गरिरहेको र त्यो घर निर्माण गर्न आवश्यक सामाग्री घर्तीको घोराहीस्थित हार्डवयर पसल वाट लैजाने गरेका थिए ।
दाङ जल्ला प्रहरी प्रमुख एवं एसपी बेलबहादुर पाण्डेका अनुसार खत्रीले घर्तीको पसल बाट हालसम्म ४ लाख ४ हजार जतिको निर्माण सामाग्री लगेपनि जम्मा डेढ लाख रुपैंया मात्रै दिएका थिए । त्यही रकम पचाउनका लागि खत्रीले घर्तीको हत्या गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
विहीवार नै खत्रीले घर्तीको हत्या गर्ने षडेन्त्रको तानावान बुने । विहीवार साढे ५ बजेतिर खत्रीले त्यही सोचका साथ छुरी किनेर घर्ती कहाँ पुगे । त्यपछि खत्रीले घर्तीलाई एकजना दाईले पैंशा लिन आईज भनेको हुँदा पैंशा लिन जाउँ भनि पसलै बाट बोलाएर लगेका थिए ।
‘ पैंशा पाउने आशामा गएका घर्तीलाई केही पर एकान्तमा लगेर छातिमै छुरा रोपेर हत्या गरेको देखिन्छ ।’ एसपी पाण्डेले भने । त्यही क्रममा घर्तीले पनि सोही छुराले खत्रीमाथि प्रतिकार गरेको हुँदा खत्रीपनि घाइते भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
‘ खत्रीले तिर्नुपर्ने पैंशा पचाउनको लागि योजना बनाएरै हत्या गरेको स्वीकार गरेको छ ,’ एसपी पाण्डेले भने ।
घर्तीले घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १४ नयाँ बसपार्कको पुल नजिकै माडी हार्डवयर पसल संचालन गर्दै आएका थिए । रोल्पा जिल्लाको माडी गाउँपालिका वडा नं. ६ कोर्चावाङ स्थायी घर भएका घर्ती बिहीवार बेलुका घोराही १३ लामीडाँडास्थित दुधेसोतामा गम्भीर घाइते अवस्थामा फेला परेका थिए । उनलाई स्थानीयले देखेपछि उद्धार गरि तत्कालै राप्ती श्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराही लगेको भएपनि चिकित्सले मृत घोषणा गरेका थिए । यसैबीच घर्तीका आफन्तले भने अझैं शव बुझेका छैनन् । हत्यामा अरुको पनि संलग्नताको आशंका गर्दै परिवार जनले सबै दोषीहरुलाई कारवाहीको पहिचान गरि पक्राउ नपर्दा सम्म शव नबुझ्ने अडान लिदै आएका छन् । हार्डवयर व्यवसायी घर्तीको हत्याको विरोधमा शुक्रवार तुलसीपुर र घोराही क्षेत्रको बजार वन्द गरिएको थियो।
घोराहीमा छुरी प्रहार गरि व्यवसायीको हत्या
घोराही बाट एकजना व्यक्ति घाइते अवस्थामा पक्राउ
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक स्थगित
तरुण दलले अग्नि पीडितलाई राहात बाँड्यो